YEYINTNGE(CANADA): Thursday, September 09
မြန်မာနိုင်ငံအရေး ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နေတဲ့ တရုပ်နိုင်ငံကို တိတိကျကျ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချ ပြောကြရအောင်
ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်က ရေရေလည်လည်ညံ့လွန်းကြပါပေတယ်။ ဒါကိုသေသေချာချာ အနူလုံပဋိလုံစဉ်းစားပြီးမှ ပြောရတာပါ။ မေလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်ကတည်းက
လုပ်ကြဖို့လိုသွားပါတယ်။ ခုတော့ အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်သွားရပါပြီ။ အကြောင်းကတော့ တရုပ်နိုင်ငံကနေပြီး လာမဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာက ကြားဝင်စွက်ဖက်ပြီး မနှောင့်ယှက်ကြပါနဲ့လို့ ပြောဆိုသွားလို့ပါဘဲ။
နိုင်ငံတကာကိုလဲ ပြောသွားသလို ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ ပြည်သူတရပ်လုံးကို ပြောသွားတာလို့ ထင်မှတ်ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပြည်တွင်းရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို ပြောသွားသလိုဘဲ နိုင်ငံတကာရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုပါ ဆိုလိုသွားတဲ့ စကားရပ်ပါဘဲ။ သာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင် နအဖစစ်အုပ်စုက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့ တရုပ်ပြည်ကို သွားတဲ့ခရီးမှာ ဒီစကားဟာ လှလှပပမြန်မာနိုင်ငံရေးကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းပါဘဲ။ တနည်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ကို စိန်ခေါ်လိုက်တာပါဘဲ ။ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်းတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ စီးပွါးရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြတာဟာ လုပ်ရိုးးလုပ်စဉ်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စတွေပါ။ သံခင်းတမန်ခင်း စီးပွါးရေးပြသနာတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို တရုပ်နိုင်ငံက ဘယ်လိုပံ့ပိုးကူညီသွားမှာလဲ ဆိုတာကို လေ့လာထားဖို့ လိုအပ်တာတခုပါဘဲ။ ခုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားပါပြီ။
ဒီတော့ဒီလိုထုတ်ဖေါ်မပြောဆိုခင် နိုင်ငံတကာရှိဒီမိုကရေစီအင်အားစု တနည်းအားဖြင့်တပ်ပေါင်းစုတွေက ဘယ်လိုနည်းနဲ့မျှ မသိလိုက်လေကြသလားလို့ တွေးတောကြည့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့အပါတ်က နအဖဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တရုပ်ပြည်ကို သွားရောက်မဲ့ခရီးစဉ်ကို ကြေညာထားတာပါ။ အတွင်းလဲသိ အပြင်လဲသိကြတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့အတွင်းလဲ ဘာမှမပြောလိုက်ရ။အပြင်ကလဲ ဘာမှမတုန့်ပြန်လိုက်ကြတာကို ၀မ်းနည်းစွာတွေ့လိုက်ရပါပြီ။ ဆရာအောင်ဗလတယောက် အသေစောသွားခြင်း ဆိုပြီးယူကြုံးမရဖြစ်မိရပါတယ်ဗျာ။ ဆရာအောင်ဗလသာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြည်ပကအတိုက်အခံအင်အားစုတွေကို သေသေချာချာတိုက်တွန်း ပြောဆိုနေမှာပါ။ အမှန်ကတရုပ်နိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပါတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဗီတိုအာဏာကို သုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီး စောစောကတည်းကဘဲ ဝေဖန်နေကြတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလောက်ရေပန်းစားနေတဲ့ နိုင်ငံကိုတောင်မှ အသိမပေးလိုက်ရခြင်းဟာ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ချာလွန်း၍သာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တရုပ်နိုင်ငံကို ရွေးကောက်ပွဲ့နဲ့ ပါတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားအမှန်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောထားလိုက်ရင် တစုံတရာအကျိုးရှိသော အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ ပြီးတော့ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ အင်အားစုတွေကလဲဘဲ နအဖစစ်အုပ်စုတွေရဲ့ တရုပ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြထားကြမယ်ဆိုရင်လဲ တစံတရာအနေနဲ့ ငြိပြီးအကျိုးရှိချင်ရှိနေမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ဘာမျှမလုပ်လိုက်ရခင်မှာဘဲ တရုပ်ပြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ဗိူလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သွားရောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သူနဲ့သွားတဲ့အထဲမှာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးတွေပါသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဂရုတစိုက် စဉ်းစားမိပါတယ်။ နအဖစစ်အုပ်စုအတွင်းမှာ မည်သူမည်ဝါတွေက အစိုးရဆိုတာမှန်း မသိရဘဲဖြစ်နေရပါတယ်။ နအဖအတွင်းမှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည်သာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လား ။ သို့မဟုတ် ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ၀န်ကြီးများးသည်သာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လား ။ ယခုအချိန်မှာ ဘယ်လိုမှ ခွဲခြားမရတော့ပါ။ ကျနော်ကဘဲ ညံ့လွန်း၍လားမသိ။ သူတို့တွေရဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံကို မလေ့လာခဲ့လို့လားမသိ ။ ဥဏှောက်ခြောက်နေမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပါတ်သက်လို့ တွေးတောကြည့်တဲ့အခါ အာဏာလွှဲပြောင်းရေးပြသနာကို စဉ်းစားမိပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုံးက န၀တအဖွဲ့က ရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းမပေးခဲ့ပါ။
ခုလဲဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် နအဖစစ်အုပ်စုက လုပ်ပါတော့မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးရင် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးပါ့မလား။ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမဲ့သူက ဘယ်သူတွေပါလိမ့်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိသူကို အာဏာလွှဲ့ပြောင်းပေးပါ့မလား။ ကျနော်စဉ်းစားကြည့်မိနေပါတယ်ဗျာ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအနိုင်ရရှိတဲ့ပါတီတွေဟာ အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းကြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ကာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက အာဏာလွှဲ့ပြောင်းပေးရအောင် သူကအစိုးရလား။ ဒါမှမဟုတ် သူဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကဘဲ အစိုးရလား။ အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိတဲ့ပါတီတွေကို အစိုးရဖွဲ့ခွင့် ပေးပြီးအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမှာတဲ့လား။ အဲဒီအစိုးရဆိုတာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့ စစ်ကောင်စီကို ပြောတာပါ။ စစ်ကောင်စီဟာ အစိုးရလား။ ဒီလိုဆိုရင် ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ အခုလက်ရှိမောင့်ကြက်သရေခေါင်းပေါင်းနဲ့ အရပ်သားအစိုးရပါလို့ ပြောနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ဝန်ကြီးများအဖွဲ့ကကော နအဖရဲ့အစိုးရအဖွဲပ၀် ၀န်ကြီးတွေဆိုတော့ သူတို့ကဘဲ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမှာတဲ့လား။ ဒီဟာတွေကတော့ဖြင့် လွယ်မယောင်နဲ့ သိပ်ပြီးကိုရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့ဗျာ။ ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်တို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ခုအချိန်မှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်နဲ့ နာမည်စာရင်းတင်သွင်းထားပါပြီ။ အဲဒီအမည်စာရင်းမှာ
၁၂၅ ဦးသောစစ်တပ်ကဆွဲခန့်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဦးသိန်းစိန်တို့ဖြစ်ဖို့များနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ၂၅ ရာနုံးကို အခွင့်ထူးခံရရှိထားသူတွေမို့ လုံးဝလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို သူတို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်နေမှာပါဘဲ။ ဒါကြောင့်လဲ မရှက်မကြောက်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်တို့တတွေ ၀န်ကြီးချုပ်တွေ ၀န်ကြီးတွေရာထူးနဲ့ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားကြတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ တဖက်စောင်းနင်းနဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက မဲအပြတ်အသတ်မရရှိခဲ့ရင် သို့မဟုတ် အစိုးရဖွဲ့နိုင်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက် မရရှိခဲ့ရင် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးရယူထားသူဦးသိန်းစိန်ဟာ သူ့ရဲ့မောင့်ကြက်သရေခေါင်းပေါင်းကို သူကိုယ်တိုင် ချွတ်ချရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ အရပ်သားအစိုးရဖွဲ့ကြတဲ့အခါမှာလဲ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် လွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီး ရွေးချယ်ကြရမှာပါ။ ဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးစီးသွားလို့ အရပ်သားအစိုးရဖွဲ့စည်း ကြပါတော့မယ်လို့ ဆိုတော့ရင် အဲဒီအချိ်န်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ခေါင်းပေါင်းနဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ကို လက်ညိုးထိုးပြီး ပြလို့ကတော့ အဲဒီလွှတ်တော်ဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဖြင့်ရင် အဲဒီရာထူးတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြီးပြိုင်လို့ မရပေဘူးလားလို့ စောဒကတက်ပြီးမေးစရာ ရှိလာပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီလိုစောဒကတက်ပြီး မေးလာလို့ ရှိရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ဂုဏ်သိက္ခာအပိုင်းနဲ့ စကားပြောကြရပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအ၀င် အခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ လက်ရှိအစိုးရကလဲဘဲ လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးတွေ သမတရာထူးတွေနဲ့ ၀င်ရောက်ပြိုင်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာထူးခြားတာက မဲအနိုင်ရရှိသွားသူ ဒါမှမဟုတ် ပါတီကို
အာဏာလွှဲပြောင်းပေးပြီး ရွှေနန်းတော်ကနေပြီး ထွက်တော်မူတတ်ကြတာဟာ အင်မတန်မှလှပတဲ့ နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အင်မတန်လှပတဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာလွှဲပြောင်းပေးပွဲလို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ လူကြီးကောင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်ပေးပြီးရင် ပြည်သူတွေရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စစ်အုပ်စုက ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အာဏာလွှဲပြောင်းမပေးခဲ့ပါဘူး ။အခုတခါရွေးကောက်ပွဲ့ကို ထပ်မံပြီးလုပ်လာခဲ့ပါပြီ။ အခုတချိန်မှာလဲဘဲ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် အာဏာလွှဲပြောင်းမပေးခဲ့ရင် ဆိုတဲ့အသိတွေက လူတိုင်းရင်ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။ စစ်အုပ်စုကို ပြည်သူတွေက အယုံအကြည်မရှိကြပါ ။ တရားမျှတမှူမရှိတဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူတွေက ပိုမိုသိကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကလဲ ဒီလိုပြသနာတွေကို မျက်စိဖွင့်ပြီး သိနေကြပါတယ်။ ဒီတော့ကာ တရားမျှတမှူရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဘယ်သူကအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမှာလဲ ဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရည်တူယှဉ်ပြိုင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလဲဘဲ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် အနိုင်ရရှိတဲ့ပါတီက လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖို့ အခွင့်အာဏာ ရရှိနိုင်ကြပါ့မလား။ နအဖစစ်အုပ်စုက လွှတ်တော်ကို ခေါ်ယူပေးသည်ထားပါဦး၊ အရပ်သားအစိုးရဖွဲ့စည်းကြတဲ့အခါ ၀န်ကြီးချုပ်ရွေးကြရပါပြီတဲ့။ ၀န်ကြီးချုပ်သ်ိန်းစိန်ကို ဆက်လက်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ကြတာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ကန့်ကွက်နိုင်ကြပြီဆိုရင် ဦးသိန်းစိန် ထွက်ပေးပါ့မလား။ အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာ ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်ရဲ့ လက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေးချွတ်ချုံကျမှူတွေ ။ ကမ္ဘာမှာအဆင်းရဆဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတာတွေ။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရဆုံးသော နိုင်ငံတွေဖြစ်ရတာကြောင့် ဦးသိန်းစိန်ကို ဆက်လက်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ နိုင်ငံကိုဦးဆောင်ဖို့ ပေးသင့်ပါသလား။ မပေးသင့်ဘူးဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်ဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးက နုတ်ထွက်ထားဖို့ သင့်မနေဘူးလား။ ဦးသိန်းစိန်က ဘယ်အချိန်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးက နုတ်ထွက်မှာပါလဲ။ ဒါတွေဟာရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပြုလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ပါတီတွေအလုပ်ဖြစ်တာပါဗျာ။ အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြဖို့ နိုင်ငံတကာကို လှည့်လည်ပြောနေကြတဲ့ ဒေါက်တာခင်ဇေါ်ဝင်းတို့ နေ၀င်းမောင်တို့ ဦးသုဝေတို့က တရုပ်နိုငငံကိုသွားရောက်ပြီး ဒီကိစ္စကို ပြောဆိုဆွေးနွေးသင့်မနေဘူးလားဗျာ။
အခုလဲဘဲ တရုပ်နိုင်ငံက ပြောလိုက်တာကို လေ့လာလိုက်ရင် တရုပ်နိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်စွာက်ဖက်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါပြီ။ ဒီတော့နအဖရဲ့ တရားမျှတမှူမရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မဲ့ ပါတီတွေဟာ ဒီလိုအချက်တွေကို တောင်းဆိုထားသင့်တာပါဘဲ။ ၉၀ ခုနှစ်မှာ အာဏာလွှဲပြောင်းခြင်း မရှိခဲ့လို့ လူ့သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာအရ မယုံကြည်နိုင်လို့ ၀န်ကြီးများအဖွဲ့ကနေပြီး နုတ်ထွက်ပေးဖို့။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖို့။ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့ စတာတွေကို တောင်းဆိုထားကြဖို့လိုတယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာကလဲ ၀င်ရောက်စွက်ခြင်းမဟုတ်သလို အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလဲဘဲ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီတောင်းဆိုချက်လောက်ကို တောင်းဆိုဖို့တော့ သင့်လျော်တာပေါ့ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တရုပ်နိုင်ငံက အထူးသဖြင့် ဒီကိစ္စတွေကို နအဖက လုပ်ပေးနိုင်အောင် တိုက်တွန်းကောင်းတိုက်တွန်းပေးမှပါ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်းရောက်မှ ကျားဖမ်းမယ် ဆင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတာထက် လွှတ်တော်အတွင်းမရောက်ခင်ကတည်းက ပြောထားဖို့လိုအပ်နေတာပေါ့ဗျ။ အမေရိနက်နိုင်ငံကို လာပြီးတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကို ပြောနေဖို့မှ မလိုတော့တာလေဗျာ။ တိတိကျကျပြောရရင် တရုပ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့ သူတို့ကသွားပြောနေရမှာဗျနော်။
တကယ်လို့ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံအင်အားစုတွေက ဒီစကားတွေကို သွားပြီးပြောနေရင် သဟာာဇါတမဖြစ်တတ်လို့ပါ။ ပြီးတော့လဲတရုပ်နိုင်ငံရဲ့ နအဖအပေါ် ထားရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသီဝရီကို သိရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောလဲပြောကြမှာမဟုတ်ပေဘူးလို့ ယူဆနိုင်စရာရှိထားလို့ပါဗျာ။ ဒီအချိန်မှာတော့ နအဖဟာ တရုပ်နိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက် လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ မရွှေနှင်းဆီဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ သူတို့အတွက် ခဏတာသဲခြေကြိုက်စရာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့ ဘယ်သူဇတ်သိမ်း ဆိုးကြမှာလဲဆိုတာကိုတော့ နိုင်ငံတကာက စိတ်ဝင်စားနေကြပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ပဲခူးလူငယ်နှစ်ဦးကို သွေးအေးအေး လူသတ်မှူဟာ ရာဇ၀တ်မှူစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့အခါ အမှူကောင်းတမှူအဖြစ်အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် ကွင်းတားနားအတွက် နောက်တိုးစာရင်းမှာ ရေးမှတ်ထားပြီးသား ဖြစ်သွားတာဆိုတာပါဘဲ။ ဒီလိုရာဇ၀တ်မှူတွေ တပုံခေါင်းနဲ့ ရှိနေတဲ့ နအဖစစ်အုပ်စုအတွက် ကယ်တင်ရှင်များအနေနဲ့ တရုပ်နိုင်ငံက မည်မျှအထိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိမ်းသိမ်းပေးမှာလဲဗျာ။ ဥပမာတခုအနေနဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ အဲဒါကို သူများတွေက ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်း မလုပ်ခင် တရုပ်နိုင်ငံကဘဲ အယင်သူများနိုင်ငံတွေထက် စောစီးစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းတခုက အထင်အရှားတခုရှိနေခဲ့တယ်ဗျ။
ခုလဲဘဲနအဖစစ်အစိုးရကပြုလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်နိုင်ငံတကာကမှ ၀င်ရောက်စွာက်ဖက်ပြီး မပြုလုပ်ရဘူးတဲ့။ ဒီတော့ တရုပ်နိုင်ငံက ဒီစကားကို ပြောလိုက်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လိုက်ခြင်း မဟုတ်ပေဘူးလားဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကို မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကသာ ဆုံးဖြတ်ရမှာဆိုတော့ အခုက တရုပ်နိုင်ငံက ရှေ့ကနေပြီးကာဆီးကာဆီးနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ပြောနေတာက တကယ့်ရယ်စရာပါဘဲဗျာ။ ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ ပါတ်သက်သူမှန်သမျှ တရုပ်နိုင်ငံရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို ကန့်ကွက်ဖို့လိုတယ်ဗျာ။ ရှုတ်ချဖို့လိုတယ်ဗျာ။ လက်မခံဖို့လိုတယ်ဗျာ။ အထဲကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲ တရုပ်နိုင်ငံကို စကားပြောဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ အပြင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲဘဲ တပ်ပေါင်းစုတွေ ၊ ဟိုအဖွဲ့တွေအစုံပေါ့ဗျာ ကျားကျားယားယား အစရှိသဖြင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အပါအ၀င် ဒီတရုပ်နိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်ရလိမ့်မယ်ဗျ။ ကန့်ကွက်ဖို့လိုသဗျ။ သူတို့နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ သဘာဝဂါစ်တွေကို
နအဖစစ်အုပ်စုနဲ့ ပြုလုပ်နေတာတွေကို အသိအမှတ်မပြုကြောင်း အသိပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ။ သူတို့တွေက နအဖနဲ့ စီးပွါးရေးအရင်းအနှီးတွေ လုပ်နေတော့ စစ်အစိုးရကို ကြောထောက်နောက်ခံပေးနေတာပါ။ ဒါကိုသတိထားပြီး ကိုယ်တွယ်ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။ တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ တရုပ်နိုင်ငံဟာ အာဆီယံလောက်တောင် မြန်မာနိုငံဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံအင်အားစုတွေက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကို မခံရတော့ သူတို့ကိုများ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလဲဘဲ နအဖလက်ခံသလို လက်ခံနေကြတယ်လို့ ထင်မှတ်နေသလားမသိပါဘူးဗျာ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုထင်မှတ်ထားနေရင်တော့ အဲဒီအထင်တွေကို သင်ပုန်းခြေရအောင် တနည်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအရေး ၀င်ရောက်စွာက်ဖက်နေတာဟာ ဘယ်သူမှ မဟုတ်ဘူး ။ တရုပ်နိုင်ငံသာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြရအောင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့တခုခုမလုပ်သင့်ပေဘူးလားလို့ ။။။။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/09/2010 1 အကြံပြုခြင်း
9 September 2010 ဒိုင်ယာရီ
9 Sep 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/09/20100အကြံပြုခြင်း
ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေးတော်ပုံ (၃) နှစ်ပြည့်သည့် စက်တင်ဘာလသို့ ရောက်ပြန်ပြီ။ စစ်အာဏာရှင်တို့ကလည်း သူတို့အာဏာသက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲအတုအယောင်ကို နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်တွင် ပြုလုပ်မည်ဟု ကြေညာထားသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်စာရွက်စာတမ်း ဖြန့်ဝေမှုများကို ကျောင်းသားနှင့် သံဃာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက စစ်ဆင်ရေးသဖွယ် လုပ်ဆောင်လာကြသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး၊ ယင်းဥပဒေဖြင့် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအား သပိတ်မှောက်ရေးတို့သည် ယနေ့လူထုကြွေးကြော်သံ ဖြစ်လာနေသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှု ကြွေးကြော်သံများကို ယနေ့ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သံဃာ့သမဂ္ဂီများကလည်း ထောက်ခံမှုပြုနေကြောင်း တွေ့ရသည်။ တနည်းအားဖြင့် ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေးတော်ပုံ စိတ်ဓာတ်သည် ရှစ်လေးလုံး လူထုအရေးတော်ပုံစိတ်ဓာတ်နှင့်အတူ ဆက်လက် အရှိန်အဟုန်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် သံဃာ့အရေးတော်ပုံနှင့် လူထုအရေးတော်ပုံ၊ သံဃာတော်တို့ဆန္ဒနှင့် လူထုဆန္ဒသည် တထပ်တည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်လည်းဖြစ်သည်။
အဆိုးထဲက အကောင်းကို ရှာဖွေချင်သူများ
အက်ရ်ှလေ ဆော့သ် Thursday, September 09, 2010 သူ့အတွေး သူ့အမြင်
သိပ်မကြာခင် လပိုင်းက အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ၊ တိုင်းရင်းသားဒေသ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ဖို့ ပါတီတွေ ထောင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ မေလကုန်လောက်မှာ မှတ်ပုံတင် လျှောက်ခဲ့ကြတဲ့ ပါတီ ၄၂ ခုထဲက သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ဟာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အဝန်းအဝိုင်း ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက ယုံကြည်ရပါ့မလား ဆိုတာကတော့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ လွတ်လွတ် လပ်လပ် မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့် ရှိရဲ့လား၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရေတွက်ပေးပါ့မလား ဆိုတာတွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ကျနော် စကားပြောခဲ့သူတွေကတော့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေဟာ ချို့ယွင်း အားနည်းချက်တွေ ပြည့်နေတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ စစ်တပ်က အားကောင်းကောင်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားမယ့် သမ္မတ စနစ် အစိုးရ တရပ်ပဲ ဖြစ်မယ် ဆိုတာ နားလည်ထားကြသူတွေပါ။ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ သက်တမ်း ရှိတဲ့ နယ်စပ်ဒေသ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဟာလည်း လူမျိုးစုတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်ကို လူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင် နည်းနည်းပဲ လုပ်နိုင်ခဲ့ပုံ၊ စစ်တပ်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကပဲ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး နယ်ပယ် အများစုကို ထိန်းချုပ်ထားပုံ ဒါတွေကိုလည်း သိကြပါတယ်။ သူတို့ မျှော်လင့်တာက ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်းမှာ လှုပ်ရှား နိုင်မယ့် နယ်ပယ် အသင့်အတင့် ရလာဖို့ပါပဲ။
၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူထုက ကြည်ညို လေးစားလို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က အပြတ်အသတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ရဲ့ သြဇာ အဲဒီလို ကြီးခဲ့ပေမယ့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ် ၆၅ ယောက်လည်း ရွေးကောက်ခံရပါတယ်။ အဲဒီ ပါတီတွေက စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ မဟာမိတ် အဖွဲ့ (UNA) ဆိုတာကို ဖွဲ့ထားတာပါ။ ဒီအဖွဲ့ဟာ NLD နဲ့ နီးနီး ကပ်ကပ် ရှိခဲ့တာကတော့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် အသိအမှတ်ပြုခံရရေး ဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြောင့် ပါပဲ။
NLD က အခု ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါတီ မှတ်ပုံမတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာပါ။ ဒီလို ဆုံးဖြတ်တာဟာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု နယ်မြေတွေမှာ ဒေသခံ ပါတီတွေအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်လို့ လူမျိုးစု နိုင်ငံရေးသမားတွေက မြင်ကြပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ၁၉၉၅ မှာ စစ်အစိုးရရဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကနေ NLD နုတ်ထွက်သွားတဲ့ အတွက် ညီလာခံမှာ စစ်အစိုးရ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ တခုတည်းသော အသံအဖြစ် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သလို အခြေ အနေမျိုးကို ပြန်ပြီး ထင်ဟပ်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လိုအင် ဆန္ဒတွေ ပါဝင်အောင် လုပ်ဆောင်ရေးက မအောင်မြင်ပေမယ့် ညီလာခံမှာ အပစ်ရပ် အဖွဲ့တွေ ပါဝင်နိုင်တဲ့ အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နစ်နာမှုတွေ၊ ဆန္ဒတွေကို ဆွေးနွေးခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ၁၉၆ဝ နောက်ပိုင်း အမျိုးသား နိုင်ငံရေး စင်မြင့်မှာ ပထမဆုံး ရတဲ့ အခွင့်အရေးပါပဲ။
ဒီနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အမျိုးသား လွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှစ်ရပ် အတွက် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု ပါတီ တချို့ ဝင်ပြိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ ပြည်နယ် ၁၄ ခု နဲ့ တိုင်း လွှတ်တော်တွေမှာ အနိုင်ရဖို့ အဓိက အလေးထားကြပါလိမ့်မယ် (ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း တို့ကို အခြေခံ ဥပဒေသစ် အရ “ဒေသ” လို့ အမည် ပြောင်းထားပါတယ်)။ သူတို့ မျှော်လင့်တာက အဲဒီ ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွေမှာ နေရာ အတော်အတန် ရထားမယ် ဆိုရင် အစိုးရ ချမှတ်ပေးမယ့် အခွန်ငွေ (သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ်လုပ်မှု အပါအဝင်)တွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ နေရာမှာ ညီညီမျှမျှ ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့၊ ကျောင်းတွေ၊ လူထု အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားရုံး စနစ်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဘာသာစကား မူဝါဒကိစ္စတွေ အခွင့်အရေး ညီမျှ လာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအာဏာကို ထိန်းညှိရေးအတွက် ဝန်ကြီးတွေ ခန့်ထားရာမှာလည်း မျှမျှတတ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လည်း သူတို့က မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပါတီ အတော်များများ အထူးသဖြင့် လူမျိုးစုငယ် ကိုယ်စားပြု ပါတီတွေက ရွေးကောက်ပွဲဟာ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အရ အရေးပါမှုကို ပြသနိုင်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်း ဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လူမျိုးရေး ဖော်ဆောင် သတ်မှတ်မှု ပိုပြီး ခိုင်မာ အားကောင်းလာအောင် လုပ်ချင်ကြတာပါ။ ပုန်ကန်မှု သက်တမ်းရှည်နေတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေလို အဝန်းအဝိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ ပါတီ တချို့ အဖို့တော့ လက်နက် မကိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့တာဟာ နယ်စပ် အခြေစိုက် တော်လှန်ရေးကနေ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။
လောလောဆယ် ပါတီတွေက မှတ်ပုံတင်တဲ့အဆင့် လုပ်နေကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာ စည်းရုံးရေး ဆင်းကြတော့မှာပါ။ အဲဒီအခါ လူမျိုးစုမဲတွေ ပြန့်မထွက်သွားရအောင် အကောင်းဆုံး ဘယ်လို လုပ်ကြမယ် ဆိုတာကို သူတို့ အချင်းချင်း စပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ ပြည်နယ်တွေမှာ ပါတီ တခုတည်းကနေ ဒေသခံတွေကို စုစည်းနိုင်ပုံ ရပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေး ပါတီ (KSPP)ကို နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် အစိုးရက မှတ်ပုံတင် ချမပေးသေးတာ အဲဒီအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ KSPP နဲ့ တခြား အမှီအခိုကင်းတဲ့ ပါတီတွေ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်နိုင်ဘူး ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကို ယုံကြည်မှု အကြီးအကျယ် နည်းသွားကြမှာပါ။
တချို့ ဒေသတွေမှာ (ဥပမာ ကရင် အသိုင်းအဝန်းမှာ) ပါတီ တခုမက ပေါ်လာပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံ မရှိကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကြားမှာ အကောင်းဆုံး လက်တွဲကြရေး သဘောတူညီမှု ရ၊ မရ ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဒီခေါင်းဆောင်တွေက ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ် ချေမွေ့တာကို သဘော တွေ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒေသဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး တချို့ ဒေသတွေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မဲတွေ ပြန့်ကွဲ မသွားရအောင် ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကူညီရေး သဘောတူပြီး အောင်နိုင်ရေး အတွက် ညွန့်ပေါင်း ဖွဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။
ပါတီမှတ်ပုံတင်တာတွေကို လက်ခံလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ (ဒါမှမဟုတ် တရားဝင် ပယ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့) ၁၉၉ဝ တုန်းက လိုမျိုး မဟာမိတ် ဖွဲ့တာတွေ ပိုပြီး ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး သမားတွေက စစ်အစိုးရဘက်တော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ လိုအပ်မယ် ဆိုတာ သိနေကြပါတယ်။
စစ်အစိုးရ ဖွဲ့ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး ပါတီကို ကိုယ်စားပြု ရပ်တည်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြတဲ့ ကရင်၊ ကချင် ဒါမှမဟုတ် မွန်ဒေသခံတွေနဲ့ပါ။
ကျနော် စကားပြောခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ် တရားမျှတမယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ သူတို့ ပါတီတွေ ကောင်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပုံပါပဲ။ အစိုးရ ထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေက နိုင်ငံရေးအရရော၊ ရံပုံငွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော အခွင့်ထူးတွေ ရနေတယ် ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူတို့က အစိုးရ ထိန်းချုပ်တဲ့ သတင်းစာတွေ၊ တခြား မီဒီယာတွေကို အသုံးချခွင့် ရှိနေတာပါ။
၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲတွေကို မျှမျှ တတ ရေတွက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရက အဲဒီလို ရလဒ်မျိုး ရွေးကောက်ပွဲမှာ နောက်ထပ် မဖြစ်ရအောင် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပိုင်းဖြတ်ထားပုံပါပဲ။ ဒီနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ ကလိမ်ကျမယ် မကျဘူး ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
ဒီလို မရေရာတာတွေ ရှိနေတဲ့ အတွက် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု ပါတီဝင်တွေဟာ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အဖြစ် ပါဝင် အရွေးခံရင် သူတို့ဟာ သူတို့ အသိုင်းအဝန်းမှာ ရပ်တည်ရေး ခက်ခဲလာရုံမက အန္တရာယ်လည်း အတော် ကြီးနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ကိုယ်စားပြု ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလို့ သဘောထားကြတာပါ။ အကြောင်းကတော့ အရည်အချင်း ရှိတဲ့သူ အများစုဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဝင်အရွေးခံဖို့ စိတ်မပါလှဘဲ တခြားသူတွေကို စုစည်းဖို့ ကြိုးစားနေတာကြောင့်ပါပဲ။
အစိုးရနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ ပါတီတွေကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ လုပ်နေချိန်မှာ အကန့်အသတ် အတော်များများနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တချို့ပါတီတွေမှာ ပညာတတ် ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိကြပေမယ့် တချို့မှာတော့ အတွေ့အကြုံ နည်းပါးတဲ့ ပါတီဝင်တွေပဲ ရှိကြတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ကရင် ပါတီ တခု ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပိုးကရင်နဲ့ ခရစ်ယာန် အများစု ဖြစ်တဲ့ စကောကရင် အသိုင်းအဝန်း နှစ်ခုစလုံး ရှိနေပေမယ့် သူတို့မှာ တတ်သိပညာရှင်တွေ၊ အားကိုးရတဲ့ ဒေသခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ မရှိပါဘူး။
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု ပါတီတွေ အဓိက ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေထဲက တခုကတော့ ရံပုံငွေ မရှိတာပါပဲ။ ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မှတ်ပုံတင်ဖို့၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးဖို့ ငွေ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲက တရားမျှတမယ်ဆိုရင် မဲ အလုံအလောက် ရမယ်လို့ သူတို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ သူတို့က မဲဆွယ်တဲ့နေရာမှာ ငွေသိပ်မကုန်ဖို့ကိုပဲ မျှော်လင့်ထားကြတာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးပြီးချင်းတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက မြန်မာပြည်အပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိတယ် ဆိုတာ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် အရေးပါတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သလား မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာ အကဲဖြတ်မှု မလုပ်ခင် ကျနော်တို့ တနှစ်ကျော်ကျော် စောင့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ခုအချိန်မှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အပြစ်ပြောဖို့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ထောက်ပြဖို့ ကြိုးစားနေကြသူတွေအဖို့ အထောက် အထားတွေ အများကြီး ရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ်လို့ ဝေဖန် ပြစ်တင်သူတွေမှာလည်း တခြား ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းကောင်းတွေ ရှိမနေပါဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသူ အတော်များများဟာ မြန်မာပြည် အခြေအနေ အကောင်းဘက်ကို ပြောင်းလဲအောင် လုပ်နေကြသူတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အသိအမှတ် ပြုသင့်တာပေါ့။ သူတို့က ရွေးကောက်ပွဲကို ရှိသင့် ရှိအပ်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး လို့ သဘောထားနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(Asley South ရေးသားသည့် Making the Best ofaBad Election ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်။ စာရေးဆရာ Asley South သည် မြန်မာနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်းရှိ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ နှင့် နိုင်ငံရေးရာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ )
အလကားလူ၊ ကိုယ့်ဘာသာဘာကိုမှလဲ မဆုံးဖြတ်ဘူး။
နောက်လိုက်တွေရှိနေပြီး နောက်လိုက်ကောင်တွေကလဲ အလကားကောင်တွေပဲ´´
ထိုစဉ် အဆိုပါအဘိုးကြီးနား မာဖီ(အရပ်ဝတ်ဖြင့်) ရဲသားနှစ်ဦးကပ်လာပြီး အဘိုးကြီးကိုမေးသည်။
မကြာမီ ခုနကအဘိုးကြီး ကမျောကသောဖြင့် ရဲနှစ်ဦးနောက်သို့လိုက်လာပြီး အမောတကောမေးသည်။
Actions: Crimes against Humanity
ABMA ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၁၅)
ABMA Journal Volume 1 No 15
အပြောလွယ်သလောက်အလုပ်ခက်တဲ့ကုလမြန်မာ့အရေးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်
“ကိုယ်တို့ တတွေဟာ ကိုယ်မက်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကို
၀ီလျှံရှိတ်စပီးယား - “Tempest” Act4: Scene 1
၂၀၀၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း၌ နယူးယောက်တိုင်းမ်းစ်သတင်းထောက် ဂျိမ်းထရပ်ဘ် (James Traub) နှင့် ပြုလုပ်သောအင်တာဗျူး၌ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုပ်သံအမတ်ဂွမ်ယာ (Guangya) က သူ့ တွင် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင်မြန်မာနှင့်ပါတ်သက်၍တင်လာသမျှကို “ဗီတို” လုပ်ရန် ပီကင်းမှအခိုင်အမာ ညွှန်ကြားချက်ရထားပြီးသားဖြစ်သည်ဟုအတိအလင်းထုတ်ပြောခဲ့သည်။ အချိန်မှာအနောက်အုပ်စုကတရုပ်၏ဆန္ဒကို
ဆန့် ကျင်၍လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ်များစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟူသောခေါင်းစဉ်ကို အတင်းထည့်သွင်းရန်အားထုတ်နေကြသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
တကယ်တမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင်မြန်မာ့အရေးကိုထည့်ဆွေးနွေးရန်အာဂျင်ဒါသို့ မူကြမ်း တင်ကြသည့်နေ့ (ဇန်န၀ါရီ ၁၂ - ၂၀၀၇) တွင်တရုပ်သာမကတရုပ်နည်းတူ ကြိုတင်သတိပေးထားသော ရုရှကပါ ဗီတိုလုပ်သဖြင်လုံခြုံရေးကောင်စီသမိုင်းတွင်တစ်ခါမှမကြုံဘူးသော နှစ်ထပ်ကွမ်းဗီတို(double veto) ထိသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဘ၀ရောက်ကာအနောက်အုပ်စုအကြီိးအကျယ်အရေးနိမ့်ခဲ့သည်။
ထို့ ကြောင့်ယခု ၂၀၁၀ နှစ်မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ ကထုတ်ပြန်သောကုလသမဂ္ဂလူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီသို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်အထူးရာစုံစမ်းရေး သမားတော့မတ်စ်အိုကျီယာကွင်းတားနား ၏အစီရင်ခံစာပါ - ကုလသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုများအရေးကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ကိစ္စ (နိုင်ငံ) တစ်ခုချင်းစီနှင့်ပါတ်သက်၍ခိုင်မာသော အချက်အလက်များရှာဖွေစုဆောင်းရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်တကွ ဖြစ်သောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်များဖွဲ့ စည်းရေး တကယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိစ္စကိုစဉ်းစားကြမည်ဆိုပါကစဉ်းစား “နိုင်ကြောင်း” - အဆိုအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါက ၂၀၀၆ခုနှစ်ကအဖြစ်မျိုးထပ်ဆိုက် မည့်အနေအထားရှိနေသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြုစုထားသောအစီရင်ခံစာကို “မပွင့်တပွင့်အင်္ဂလိပ်စာသွား (slightly opaque English)” ဖြင့်ရေးထားသဖြင့်ပြင်သစ်လို ၊တရုပ်လို၊ ရုရှလိုဘာသာပြန်ရသူများအခက်အခဲအနည်းငယ်စီရှိကြသော်လည်း ကွင်းတားနားပြောသည်မှာကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တန်ရာ အခြေရှိမရှိကိုစဉ်းစားချိန်ဆရန် ဆန္ဒရှိသည်ဆိုလျှင်စဉ်းစားကြရန်မျှသာဖြစ်ကြောင်းလုံလောက်သောအဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းမှုတော့ရှိပါသည်။
(အောက်ပါမူရင်းစာစုကိုမူ ဘာသာပြန်မတိကျမည်စိုး၍ချန်ထားရစ်ခဲ့ပါသည် - ဘာသာပြန်သူ)
The French version is perhaps closer to Quintana's thought when it suggested that UN institutions "voudront peut-etre envisager la possibilite" switching into the future tense and throwing ina"peut-etre" for good measure. The Chinese version could rely on the ubiquitous "kě yĭ"4which implies both "can" and "may", while the Russian plumped for "mogut"5which is more ofa"can" thana"may".
သို့ သော်သူ၏ ဤအကြံပြုချက်ကို လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစည်း များနှင့် မြန်မာ့အရေးတက်ကြွသူများ အားလုံးနီးနီးက ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ကြီးကနေ၍ (မြန်မာ့ အရေးအတွက်) စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့ ရန် ကွင်းတားနားကိုယ်တိုင်ကတရားဝင်ထောက်ခံချက်ပေးလိုက်သယောင်ယောင်သဘောမျိုးအမိအရ ဖမ်းဆုပ်လိုက်ကြပါသည်။
“ဤကဲ့သို့ သောကော်မရှင်တရပ်ဗားမား(Burma) အတွက်ဖွဲ့ စည်းရေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်အထူး စုံစမ်းရေး အရာရှိ(ကွင်းတားနား) က မတ်လအတွင်းကထောက်ခံထားသည်။” ဟုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာအဖွဲ့ (Amnesty International) ကကိုးကားခဲ့သည်။
(သို့ သော်လည်း)နိုင်ငံတကာအစိုးရများကတော့သတိထား၍တုန့် ပြန်ကြပါသည်။ သြစတျေးလျ၊ ယူအက်စ်၊ ယူကေ၊ ချက်၊ စလိုဗက်ကီးယားနှင့်ယခုနောက်ဆုံးပိတ်ကနေဒါတို့ က ကွင်းတားနား၏ကုလအဖွဲ့ အစည်းများ သို့ အဆိုပြုတင်ပြချက်ကို မူအားဖြင့်ထောက်ခံ ကြောင်းဖေါ်ပြကြသော်လည်းစစ်ရာဇ၀တ်မှုများ (war crimes) လူသားမျိုးနွယ်ကိုဆန့် ကျင်သောရာဇ၀တ်မှုများ (crimes against humanity) စသည့်အသုံးအနှုံးများကို မသုံးမိဘို့ သတိထား၍ရှောင်ရှားခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ “အမှုအပေါ်ကြိုတင်စီရင်ချက်ချက်ချထားပြီးသလို” ဖြစ်နေမှာစိုး၍တကြောင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဖွဲ့ ဝင်မဟုတ်သောနိုင်ငံတကာရာဇ၀တ် တရားရုံး (ICC) နှင့်သွား၍နွယ်နေမှာစိုး၍တကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ တွင်းပြုလုပ်ခဲ့သောသတင်းဌာနများနှင့်ပုံမှန်လုပ်နေကျတွေ့ ဆုံ ပွဲတစ်ခု၌ (ဤကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍အမေရိကန်)နိုင်ငံခြားရေးဌာနသို့့့ သတင်းထောက်များကမေးသောမေးခွန်းတစ်ခု ကိုဖြေဆိုရာ တွင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဖိလစ်ခရောက်လီ (Philip Crowley) က -
“ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖေါက်မှုတွေဗားမား(Burma) မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပါတ်သက်လို့ စုံစမ်းဘို့ သင့်မြတ်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖွဲ့ စည်း မယ့်နိုင်ငံတကာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်တစ်ခုဟာလျှော်ကန်တဲ့(ကိစ္စဖြစ်)တယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့(အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက) လက္ခံထားပါတယ်” ဟူ၍ (ပြော့ပျောင်းသောလေသံဖြင့်)ဖြေကြားသွားသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝီလျှံဟိတ်ကဆိုလျှင် (၀ါရှင်တန်ထက်ပင်အများကြီးလေသံလျှော့၍)- “စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိစ္စကို(ဗြိတိန်က) လုံးဝဥသုံသဘောမျိုးနဲ့ တော့မပယ်ရှားပါဘူး” ဟုသာလူပုံ အလယ်မှာပြောသည်။
အဓိပ္ပါယ်မှာ(ဤကိစ္စအတွက်)ကုလသမဂ္ဂသည်အသုံးချဘို့ အကောင်းဆုံးနေရာ/အဖွဲ့ အစည်းအဖြစ်ယူဆကာ အသုံးချလျှင်နိုင်ငံရေးအရကော(ထို့ ထက် ကုလအဖွဲ့ ကြီးကိုဖွဲ့ စည်းပေးထားသော)အခြေခံမူများအရပါအခက် အခဲတွေ (political and more importantly doctrinal difficulties) တလှေကြီးရှိနိုင်သည်ဆိုတာကိုအမေရိ ကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများနည်းတူဗြိတိန်ကလည်းကြိုတင်တွက်ဆထားမိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီကိုလူ့ အခွင့်အရေးကိစ္စတွင်ကိုဆွဲသုံးတာကိုသူတို့ မနှစ်မျို့ ကြောင်းတရုပ်ကောရုရှကပါ ပြသထားကြပြီးဖြစ်ရာလက်တွေ့့အဆို ထပ်တင်လာလျှင်လည်းဗီတို(ထပ်)သုံးမည်ဆိုတာလည်းရှင်းပြီးသားပင်ဖြစ်သည်။ (လုံခြုံရေးကောင်စီထက်စာလျှင်) လူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီ (Human Rights Council) ကပိုသင့်မြတ်သောကြောင့်ဤကောင်စီသို့ သာကွင်းတာနားကသူ၏အစီရင်ခံစာနှင့်အဆိုပြုချက်ကိုတင် ခဲ့တာလဲဖြစ်သည်။ သို့ စေကာမူလူ့ အခွင့်အရေး ကောင်စီကလည်းကွင်းတားနား၏အဆိုပြုချက်ကိုနား ထောင်ယုံနားထောင်ပြီးမဲခွဲစရာမလိုသောသာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုသာ မတ်လ ၂၆ ရက် (၂၀၁၀ခုနှစ်) တွင်ချပေးခဲ့သည်။
ဤမျှနှင့်မကျေနပ်၍လူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီကိုပဲထပ်တင်ရန်အားထုတ်ကြမည်ဆိုလျှင်လည်း (ဆိုခဲ့သောကမ္ဘာ့) နိုင်ငံရေးနှင့်(ကုလ၏) အခြေခံမူများနှင့်ညိနေဟူသောခံစားချက်ကြောင့်ပင် နိုင်ငံပေါင်းများစွာတို့ အနေဖြင့် ရှေ့ ဆက်၍ဆုတ်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်နေနိုင်သေးသည်။
(လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့်လူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီတို့ ကိုသုံး၍မရနိုင်မှန်းသဘောပေါက်လာကြသည့်အခါ) အထွေထွေညီလာခံကြီး နှင့်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်(ရုံး) တို့ သည့်(အဆိုပါ)စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးကိုတာဝန်ပေးခံရမည့်နေရာများအဖြစ်မြင်လာပြန်သည်။
အထွေထွေညီလာခံကြီးအနေဖြင့် “ပြဿနာကိုလေ့လာရေး” လုပ်ပြီးထောက်ခံတင်ပြချက်များလုပ် ကောင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့ သော်အထွေထွေညီလာခံသည်သူ့ ပင်ကိုယ်အနှစ်သာရအရ “ညီလာခံ” သာဖြစ်သည်။ “ကွန်ဖရင့်” သာဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ ဘာကိုမှကိုယ်တိုင်ထ၍လုပ်ရသည့်အဖွဲ့ အစည်းမဟုတ်။ စင်စစ်ယခုပြောနေသည့် “အချက်အလက်ရှာဖွေရေး” ကိစ္စကိုကိုယ်တိုင်လုပ်မည်ဆိုလျှင်ပင်ဘောင်ကျော် နေပြီဖြစ်သည်။
ဘာဘဲပြောပြော - အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့(တရုပ်နှင့်ရုရှ) တို့ ကကန့် ကွက်နေကြသည့်ကြားက အထွေထွေညီလာခံကသူ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်ကျော်၍လုပ်နိုင်လိုက်ပြီ၊ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဆင့်သာ မက၊ “မြန်မာပြည်အရေးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်” ကိုပါဖွဲ့ နိုင်ပြီဘဲဆိုပါစို့- ဤကိစ္စမျိုးသည်အစဆွဲမိလျှင် ကိုယ်ရပ်ထားချင်သည့်နေရာတွင်ရပ်ထား၍မရ။
အထွေထွေညီလာခံသည်လုံခြုံရေးကောင်စီမဟုတ်သောကြောင့်ဗီတိုမရှိ။ “အရေးကြီးပြဿနာများ” အတွက် ညီလာခံတက်နေသောကိုယ်စားလှယ်များအနက်မှမဲပေးသူစုစုပေါင်း၏သုံးပုံနှစ်ပုံကထောက်ခံလျှင်အဆိုတစ်ခုသည်အတည်ဖြစ်သည်။
ညီလာခံမတက်သောနိုင်ငံ၊ တက်ပါလျှက်နှင့်(ထောက်ခံ/ကန့် ကွက်တစ်ခုခုမလုပ် သော) မဲမပေးဘဲနေသောနိုင်ငံများကိုဆုံးဖြတ်ချရာတွင်ထည့်သွင်းမရေတွက်။ ဆိုလိုသည်မှာအဆိုတစ်ခုသည် အထွေထွေ ညီလာခံတွင်လိပ်ခဲတင်းလင်းဖြစ်ကာဆုံးဖြတ်ချက်မကျနိုင်တာမျိုး ဖြစ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။
(ဤသို့ ဆိုလျှင်) မရှိသေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း/စီရင်ထုံး/ နမူနာ(precedent) အသစ်တစ်ခု (မြန်မာ့အရေးကိုအကြောင်းပြုကာ) တီထွင်မိသလိုဖြစ်သွားမည်။ ဤသို့ ဖြစ်သွားမည်ကိုနိုင်ငံ အများစုကြီးကမလိုလားကြ။
ထို့ ကြောင့်(ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်နိုင်ရန်ခဲယဉ်းနေသော်လည်း - ဖြစ်လာသည်ဟုပဲဆက်တွေးကြည့်ကာ)
အထွေထွေညီလာခံသည်ကုလထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်အားမိမိတို့ ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည် ဖေါ်ပေးရန်ထောက်ခံတင်ပြရန်သာကျန်တော့သည်။ သို့ ဆိုလျှင်လည်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်ကို ညွှန်ကြားချက်(instruction) ပေးရာကျနေသဖြင့်ကုလ၏အခြေခံမူများအရမသင့်လျှော်ပြန်ပေ (doctrinally improper)။
သို့ ဖြစ်ရာ - နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်နည်းအဖြစ်နှင့် - အတွင်းရေးမှုးချုပ်ကဦးစီးဦးဆောင်ကမကထပြု၍ ဤ“စုံစမ်းရေး” ကိုလုပ်သည်ဆိုလျှင်ကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမေးစရာရှိသည်။
မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုသာဆက်၍ဖြေရမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး (ဘန်ကီမွန်း) က လည်း ဤကဲ့သို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမရှိဘူးသည့်ကိစ္စကို(ကုလသမဂ္ဂ)အဖွဲ့ ကြီးထံမှသင့်မြတ်လျှော်ကန်သော လမ်းညွှန်မှု (appropriate guidance) အသေအချာမရဘဲနှင့်သူ(ခေါင်းခံ၍) လုပ်ရန်ဆန္ဒမရှိကြောင်း အရိပ်အရောင်များပြသခဲ့ပြီးဖြစ်နေသည်။
မကြာမီရက်များအတွင်းကွင်တားနားနှင့်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်တို့ သည်မြန်မာပြည်လူ့ အခွင့်အရေး အခြေအနေနှင့်ပါတ်သက်သောအစီရင်ခံစာတစ်စောင်အထွေထွေညီလာခံသို့ တင်ကြဘို့ ရှိနေသည်။
ခရစ္စမတ်မတိုင်မီရက်သတ္တပါတ်များအတွင်းတတိယကော်မတီ (The Third Committee) ကလည်း အထွေထွေညီလာခံတင်ရန်အဆိုမူကြမ်းတစ်ခုအပြီးပြင်ဆင်ပေးရန်အစည်းအဝေးစထိုင်လိမ့်မည်။
အချို့ ကအာချီဆန်နည်း(Acheson Plan) ဟုအများကခေါ်ကြသောကုလအထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၃၇၇ (၁၉၅၀) သို့ မဟုတ် “ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ညီညွတ်ကြစို့ ” (Unity for Peace – UN General Assembly Resolution 377 of 1950) ကိုသုံးကြည့်ရန်အကြံပေးကြသည်။
အာချီဆန်နည်းအရ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင်ဆက်၍ရှေ့ ဆက်တိုး၍မရ (impasse) ဖြစ်မည့်အရိပ်အယောင် မြင်နေသောဤ “မြန်မာပြည်အခြေအနေ (The Siutation in Myanmar)” ခေါင်းစဉ်ကိုလုံခြုံရေးကောင်စီက ဆွေးနွေးရန်ခေါင်းစဉ်များစာရင်း (agenda) မှထုတ်မပြစ်ဘဲဆက်၍ထားရှိကာအချိန်အခါ အလိုက်အလျဉ်း သင့်သလို မကြာမကြာ ယင်း၏အစည်းအဝေးများတွင်ပြန်အစဖေါ်ပေးနေရန်ဟူ၍ဖြစ်သည်။
သို့ ဆိုပြန်လျှင်လည်း အစကတည်းကမြန်မာကိစ္စလုံခြုံရေးကောင်စီ၌ရှေ့ ဆက်မတိုးနိုင် (impasse) ဖြစ် နေခြင်းမှာ ဤအရေးသည်(ကမ္ဘာ့)ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်တန်းချိမ်းချောက်/မချောက်ဆိုသည့်အပေါ်အဖွဲ့ ဝင် များသဘောထားမညီနိုင် ကြခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသည်ဖြစ်သည်။ ယခုပြောနေသော “ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညီညွတ်စို့ ” ဟူသောမူသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်ချိမ်းချောက်နေပြီဟု လုံခြုံရေးကောင်စီဝင်တိုင်းက သံသယမရှိစတမ်းတသဘောတည်းခံစားလာရသည့်အချိန်ကျမှ ထိုဘုံခံစားချက်အပေါ်အခြေတည်၍ ကျင့်သုံးရန်ဖြစ်နေသဖြင့်မဆီလျှော်ဖြစ်နေပြန်သည်။
ဘားမားကင်ပိန်းယူကေ (Burma Campaign UK) သို့ သူရေးသောစာတွင် (ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး) ၀ီလျှံဟိတ်က “(မြန်မာနှင့်ပါတ်သက်လို့ ) ကျနော်တို့ လုပ်ကြမဲ့ဘယ်လှုပ်ရှားမှုမဆိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဝင်ပါမှု (engegement) လိုအပ်တယ်။” ဟုပါရှိသည်။
အာရှ၏ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ပံ့ပိုးမှု- အထူးသဖြင့်တရုပ်၊ အန္ဒိယ၊ ရုရှ နှင့်အေဆီယင် (ASEAN) နိုင်ငံများရဲ့ အကူအညီမပါလျှင်ဘာလုပ်လုပ် လုပ်သမျှမလေးနက်ဘဲ၊ တမင်အကွက်ဆင်နေသည်၊ မြန်မာကိုမကောင်းကြံဖို့ အနောက်နိုင်ငံတွေနောက်တကြိမ်ဂိုဏ်းဖွဲ့ ကြပြန်ပြီဟုသာကမ္ဘာကမြင်ကြလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဤကိစ္စကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသာဦးဆောင်လိုက်လျှင်နော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ် Kjell Mange
Bondevik (အော့စလိုစင်တာတွင် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ က) ပြောသလို - သေမင်းဖက်နမ်းတာ(kiss of death) ခံရသလိုပင်ဖြစ်သွားနိုင်သေးသည်။
သို့ တစေနော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ်သည် မြန်မာကိစ္စကိုအများအာရုံပြုမိမည့်မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှလက် လွတ်မခံသူ ဖြစ်သည်။ သူကပင် “လာမည့်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲဟာအခုကတည်းကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော် များများကရှုံ့ ချတာခံနေရပြီ၊ အကယ်၍ ကုလ သမဂ္ဂကစုံစမ်းတာမျိုးခံရဦးမယ်ဆိုယင်တော့ ထပ်ပြီးတော့တောင် အမှတ်လျှော့သွားဦးမယ်” ဟုလည်းဝေဘန်ထားသည်။
စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိစ္စနှင့်ရွေးကောက်ပွဲတို့ ဆက်စပ်နေမှုကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကသတိမပြုမိဘဲနေလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ဒါဟာရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်ဘို့ နိုင်ငံရေးထိုးနှက်ချက်သက်သက်လုပ်နေတာဟု နေပြည်တော် ဘက်ကမုချတွက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ် (Derek Tonkin) သည် မိမိကိုယ်ကိုကုလသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ အစည်းများလုပ်ငန်းဆောင်တာများပါတ် သက်လျှင်ကျွမ်းကျင်သူဗဟုသုတရှိသူဟုမကြွေးကျော်ပါ။ သို့ သော်နိုင်ငံခြားရေးဝါဒရေးရာများကိုစီမံကိုင် တွယ်ဘူးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကာလကြာရှည်စွာဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေရသောမြန်မာပြည်ကလူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာလျှော့ပါးသက်သာရေး၌လက်တွေ့ ဘယ်ကစရမည်၊ ဘယ်ကစ၍လုပ်မှဖြစ်နိုင်မည်ဆိုတာကိုတော့ အသေးစိတ်အချက်များကိုတစ်စချင်းတစ်ခုချင်းကစ၍လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာပရိဿပ်၏ညီညွတ်ခိုင်မာရေရာသောထောက်ခံမှုရမည့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မျိုးတစ်ခုကိုလက်ခံဘို့ကျွန်ုပ်အတွက်ပြဿနာမရှိပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် လတ်တလောအနေတွင် အနောက်တိုင်းအစိုးရများ သည် အကျိုးရှိဘို့ ထက်အကျိုး ယုတ်ဖို့ ကများနေသော မြန်မာ့အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တစ်ခု ကို ကုလ သမဂ္ဂအမည်သုံး၍အတင်းဖွဲ့ ခိုင်း နေသည့်တက်ကြွသူများပေးနေသောဖိအားကို ဦးညွှတ်မည့်ပုံမပေါက် သေးပါ။
မြန်မာ့အရေးကုလသမဂ္ဂ၏ ကိုင်တွယ်ပုံသည် ယင်းကိုင်တွယ်နေသည်မြန်မာ့အရေးထက်ပိုဆိုးသော - အရှေ့အနောက်ဆက်ဆံရေး၏ အခြားမျက်နှာစာများဖြစ်သော - အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြဿနာ၊ အီရန်၊ ဆူဒန် နှင့် အာဖဂန် နစ္စတန်တို့ ကို ပို၍ခက်ခဲသွားအောင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နိုဝင်ဘာ (၇) ရွေးကောက်ပွဲရက်မတိုင်မီဘာကော်မရှင်မှပေါ်လာမည့်အခြေအနေမရှိ။ ရှေ့ နှစ် (၂၀၁၁) မတ်လ သို့ မဟုတ် ဧပြီလလောက်တွင် နေပြည်တော်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးအသစ် တစ်ခု၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်း ပုံဥပဒေသစ်ကိုအခြေခံ၍မွေးဖွားလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဤသို့ ဆိုလျှင် ကွင်းတားနားတယောက် မြန်မာပြည်သို့ နောက်ထပ်တခေါက်ဝင်ခွင့်ရမည့်ပုံမပေါ်သော်လည်း ပြဿနာကိုတော့ မြန်မာအာဏာပိုင်များနှင့် တိုက်ရိုက်နှင့်လေးနက်စွာစကားပြောနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းပွင့်ကောင်းပွင့်လာနိုင်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီယခုအချိန်တွင်အလွန်အကျွံစိတ်ပြင်းပြနေခြင်းများသည်မြန်မာပြည်သူများ၏ ကောင်းကျိုး ကိုသည်ပိုးရန်ကျိမ်းသေမည့်အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်မည့်ပုံမပေါ်ချေ။
မှတ်ချက် - မူရင်းစာရေးသူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာပြန်မတိကျလျှင်ဘာသာပြန်သူ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါမည်။ (မြင့်ရွှေ -မြန်မာသံတော်ဆင့်)
တပ်ကပစ်သတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားရာထို အချက် ကိုကွင်းတားနားကသူ၏လာမည့်အစီရင်ခံစာတွင်ထည့်မည်ဟုအတိအလင်းကြိုတင်ကြေငြာထားသည်။ နိုင်ငံရေးကြောင့်မဟုတ်သောအရပ်သားနှင့်စစ်သားပဋိပက္ခများသည်တိုင်းပြည်အနှံ့ တွင်မကြာမကြာဖြစ်နေသည့်အတွက်ချွင်းချက်တွေ (isolated cases) ဆိုတာထက်ထုံးစံ (pattern) နှင့်ပိုတူလာနေသည်ဟုဆိုရမည်။ ယခု တကြိမ်သည်အရုပ်ဆိုးလွန်းသည်မှာအမှုကျူးလွန်သူ (အရာရှိ) များသည်ဒေါသအလျှောက်ပြဿနာဖြစ်ရာနေရာ တွင်ချက်ချင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ဘဲမိမိတို့ လက်အောက်ငယ်သားများကိုတပ်မှပြန်ခေါ် လာ၍အမိန့် ပေးစေခိုင်းခြင်းဖြစ်သလို၊ အမိန့် ပေးခံရသူစစ်သားကလည်းတချက်တလေမဟုတ်၊ စစ်မြေပြင်တွင် ပစ်သလိုဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာရက်စက်မှု (brutality) ဖြစ်နေသည်။ စစ်တပ်၏အရပ်ဘက်အပေါ်ပကတိသဘောထားကိုပြသလိုဖြစ်နေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးကာလတွင်ကွင်းတားနားအဖို့ လက်နက် ကောင်း တစ်ခုရသွားသလို ဖြစ်သည်။ဤအခြေအနေကိုမြန်မာအစိုးရကမည်သို့ ကုစားမည်စောင့်ကြည့်ရပေမည်။
မဝင်းမော်ဦး(၂၂)နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေး ဖိတ်ကြားစာ
စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့မှ မန္တလေးမှာ စာဖြန့် ဝေ..
ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်အတွင်း လှုတ်ရှား မှု့
မြေသြဇာ ရဲဘော်များမှ မ အိမ်သာ အတွင်း ကပ်နေသောပုံ
ပြည်သူသာ အမိ ပြည်သူသာ အဖ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ဒီလိုလည်း အခြေအနေ ကို စောင့်ကြည့်ရသေးတယ်။
ဆိုင်ကယ်ရပ်နားထားရာ နေရာလည်း မချန်ခဲ့ဘူး
အဆောင်တွေထဲထိ ယူလာပြီး သေချာ ဖတ်ရှု့လေ့လာနေသော ကျောင်းသားတဦး
၁၇ စာမေးပွဲ စမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဇယား ဘုတ်မှာလည်း ကပ်ခဲ့တယ်။
ပဲခူးတိုင်း ပဲခုးမြို့ ဇိုင်းဂနိုင်း တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွါားခဲ့သည့် စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူမှ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို တရားဝင် တောင်းပန်ရန်နှင့် မည်သို့မည်ပုံ အပြစ်ပေး အရေးယူထားတယ်ဆိုတာများကို ပြောကြားပေးရန် တောင်းဆိုချက်၊ မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်နှင့့်် ပြည်သူသာ အမိ၊ပြည်သူသာ အဖ ဆိုသည့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များ ကို မန္တလေးတိုင်း ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း ကျား/မ အိမ်သာများ၊ဆိုင်ကယ်ရပ်နားရာနေရာများနှင့်လူနေဆောင်များ အတွင်းသို့ လူထုတရပ်လုံးနှင့်စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာ အဖွဲ့ မှ လိုက်လံကပ်ခြင်း၊ဝေငှခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအရေး ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နေတဲ့ တရုပ်နိုင်င...
အပြောလွယ်သလောက်အလုပ်ခက်တဲ့ကုလမြန်မာ့အရေးစုံစမ်း...
စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့မှ မန္တလေးမှာ စာဖြန့်...